08/21/13 ~ Myanmar News Updates
9:23:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဇာဂနာက သူဟာ ပဲလှော်ကြားကဆား ဖြစ်နေပြီလို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဧရာဝတီ မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာမှာ မစပ်စုက အသေးစိတ် ရေးသားထားပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံက မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ ပေးစာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာတယောက်ကို ကန့်သတ်တဲ့အမိန့်စာပါ။ ဒီစာ ဒီကန့်သတ်ချက်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းမှာ ဇာဂနာ၊ မင်းကိုနိုင်၊ ကြည်ဖြူသျှင် စတဲ့ စတဲ့ အထင်ကရတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
ကဲ ... မစပ်စု ရေးသားချက်ကို ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ကို အနုပညာလုပ်ခွင့် ၃ လ ပိတ်လိုက်ပါပြီ။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အသစ် ဖွဲ့ပြီးတာ ၂ နှစ် မပြည့်သေးပါဘူး၊ တိတိကျကျ ပြောရရင်တော့ တနှစ်နဲ့ လေးလပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရလက်အောက်ကလို အကျင့်ဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာပြီလားလို့ တွေးဖို့ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ပူပူနွေးနွေး ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းကတော့ သန်းဖေလေး၊ ဇာဂနာ၊ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)၊ အရိုင်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ မိုက်တီးတို့ကို ပိတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ထူးထူးခြားခြား အစိုးရနဲ့ ကင်ကင်းရှင်းရှင်းပါ၊ NGO စစ်စစ်ပါ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးကြီးက အရင်က စစ်အစိုးရလက်ထက်ကစိတ် ပြန်ပေါက်သွားပြီးလားလို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ပိုဆိုးတာက ဒီလို ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ကို ပိတ်ပစ်ဖို့ တိုင်တာ ဇာဂနာဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ်နေတာပါပဲ။ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ မင်းလူ စကား ငှားသုံးရရင် “ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ” ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မစပ်စု သဘာဝအတိုင်း မေးမြန်းကြည့်ရပါဦးမယ်။
လူရွှင်တော် ဇာဂနာကို မစပ်စုက လှမ်းပြီး စပ်စုကြည့်လိုက်တော့ “ကြံကြီးစည်ရာဗျာ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာကိစ္စနဲ့မှ မတိုင်တတ်ပါဘူး။ တိုင်လည်း မတိုင်ဖူးပါဘူး” လို့ ဖြေလာပါတယ်။ ဒါဖြင့် ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ကို အနုပညာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ၃ လ ပိတ်တဲ့ကိစ္စ ဦးဇာဂနာ မသိဘူးလား ဆိုတော့မှ ဇာတ်ရည် လည်ပါတော့တယ်။
“ကျနော့်ဆီ မနေ့က စာရောက်လာတယ်။ ကိုညီအောင်ကို ၃ လ ပိတ်တဲ့စာ။ ကျနော် တော်တော် အံ့အားသင့်တယ်။ ကျနော်က န၀တ လက်ထက်မှာ ၃ နှစ် တခါ၊ ၅ နှစ်တခါ၊ ရာသက်ပန် တခါ အနုပညာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိတ်ပင် ခံခဲ့ရတဲ့ကောင်ပါဗျာ။ ကျနော့်လိုမျိုး ဘယ်သူ့ကိုမှ အပိတ် မခံစေချင်ပါဘူး” လို့ သူ့ ခံစားချက်ကို ပြောပြပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို လူရွှင်တော် ဇာဂနာက ဇာတ်ညွှန်းခွဲပြီး ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ရိုက်ထားတဲ့ “မမပြုံး ပြုံးစမ်းပါ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်က ပိုင်ရှင်ဆီမှာ ခွင့်မတောင်းဘဲ ရိုက်ကူးလိုက်ရာက စတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“တကယ်က ဒီဇာတ်ကားရဲ့ မူလ ပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်၊ ဇာတ်လမ်းရေးသူက မင်းကိုနိုင်ပါ။ ကျနော်က ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာက ကြည်ဖြူသျှင်။ တိုင်ချင်းတိုင် မင်းကိုနိုင်က တိုင်ရမှာ။ ဘာကြောင့် ကျနော့် နာမည် အလွဲသုံးစား လုပ်ရသလဲ ကျနော် မသိဘူး။ ကိုညီအောင်က သူ ကျနော်တို့ဆီက ခွင့်မတောင်းဘဲ ဒီဇာတ်လမ်းကို ရိုက်မိပါတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလလောက်က ကျနော်နဲ့ မင်းကိုနိုင် မန္တလေး ရောက်နေတုန်း ဖုန်းဆက် တောင်းပန်တယ်။ ကျနော်ကလည်း ရပါတယ်ဗျာ၊ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မင်းကိုနိုင်ကို ပြောပေးပါ့မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ သူကလည်း ကားရိုက်တာ ခဏ ရပ်ထားမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည်ဖြူသျှင်က မင်းကိုနိုင်ဆီကနေ ၀ယ်ပြီး ဗီဒီယို ရိုက်ပြီးနေပြီ။ ဒီတော့ ကိုညီအောင်ကို ခဏစောင့်ပါ၊ ကြည်ဖြူသျှင်ရဲ့ကား ထွက်ပြီးတော့မှ ဆက်လုပ်ပေါ့လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါလည်း အစည်းအရုံးက ချထားတဲ့ မူပဲလေ။ အခုတော့မှ ကျနော်က တိုင်လို့ ဆိုတာတော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုင်ဘူး။ ကိုညီအောင်က ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် လုပ်တုန်းကတောင် သူ့အနေနဲ့ ခွင့်မတောင်းဘဲ လုပ်ခဲ့မိတာ တောင်းပန်တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ မစပ်စုလည်း ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ကို မေးကြည့်မိပါတယ်။ သူ့အဆိုအရတော့ ဒီကားက နှစ်ခါ ရိုက်ထား ပြီးသား၊ ပထမ တခါက ဒွေးနဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို သရုပ်ဆောင်တယ်၊ ဒုတိယ တခါကတော့ သူရိုက်ပြီး ထွန်းထွန်းနဲ့ နန္ဒာလှိုင် သရုပ်ဆောင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ကျနော် ရိုက်တုန်းက မင်းကိုနိုင် ဆီကနေ ကျပ်တသိန်းနဲ့ ၀ယ်ရိုက်တာ။ ကိုဇာဂနာ ၀ယ်ပေးတာ။ ကျနော့် ကားမှာ ဇာတ်လမ်း ပေါ်ဦးထွန်းလို့ စာတန်းထိုး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မင်းကိုနိုင်လို့ မဖော်ခဲ့ရတာ ခွင့်မပြုလို့ပါ၊ ဒီတုန်းက ၂၀၀၆ ခုနှစ်လေ။ အခု ဟိန်းဝေယံနဲ့ ရိုက်ဖို့ ဇာတ်လမ်းစိတ်ကြိုက် ရှာတာမတွေ့တော့ ဒီကားဟောင်းလေး ပြန်ရိုက်မယ်၊ လူတွေလည်း မေ့လောက်ပြီ။ ဦးသူရနဲ့ ကျနော်နဲ့က ညီအစ်ကိုလို ခင်နေတော့ နောက်မှ ခွင့်တောင်းတော့မယ် ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကြည်ဖြူသျှင်က ကိုမင်းကိုနိုင်ဆီက ၀ယ်ပြီးသား၊ ရိုက်ပြီးသား ဖြစ်နေတယ်” လို့ ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်က ပြောပါတယ်။
စာရေးသူ ကာယကံရှင်ကလည်း ကျေနပ်တယ်၊ ဇာတ်ညွှန်းဆရာကလည်း ဘာမှမပြောဘူး၊ ပြောခွင့်လည်း မရှိဘူး။ ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရှေ့ကားပြီးမှ နောက်ကား လိုက်ပါ့မယ်၊ ကျော်မတက်ပါဘူး ဆိုထားရက်နဲ့ ဘာကြောင့် ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ကို ပိတ်ရတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒါရိုက်တာက သူ မသိကြောင်းဘဲ ပြောရင်း ရယ်ပါတယ်။
လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ကတော့ “ကျနော် မကျေနပ်တာ ဒါပဲ။ ကျနော်က တိုင်လို့လည်း မရဘူး၊ တိုင်ခွင့်လည်း မရှိဘူး။ ဆိုင်လည်း မဆိုင်ဘူး၊ ဒါကို ကျနော့်နာမည် အလွဲသုံးစား လုပ်တာ မကြိုက်ဘူး။ ဒီလို ပိတ်တာ ဆို့တာ အရွံမုန်းဆုံးပဲ။ ပိတ်တာ (ပြိတ္တာ) အစည်းအရုံး ဖြစ်နေပြီ။ ဒီစနစ်မကြိုက်လို့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တိုက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘီလူးသတ်တဲ့ မင်းသားက ဘီလူး ဖြစ်သွားတာကိုးဗျာ” လို့ ဆိုလာပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းရော၊ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကြူလေးကိုပါ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ပေမယ့် အစည်းအရုံးသာ လာခဲ့ဖို့ပြောနေတော့ မစပ်စုကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ကနေ လှမ်းပြီး ဆက်သွယ် ရတဲ့သူ ဖြစ်နေတာကြောင့် မေးမြန်းလို့ ရသမျှနဲ့ပဲ တင်းတိမ်ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလို ပိတ်တာဆို့တာတွေ လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စ၊ ဦးဇာဂနာက တိုင်ကြားတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ် နေတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ကိုယ်တိုင် အစည်းအရုံးဆီ မေးမြန်းဆက်သွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ကျနော် ဖုန်းဆက် ကြည့်ပါတယ်။ ကိုလူမင်းက နေပြည်တော် ရောက်နေလို့ သူမသိဘူး တဲ့၊ အခုမှ ရုံးကို သွားနေတာတဲ့၊ မေးပြီး အကြောင်းပြန်ပါ့မယ် တဲ့။ ဦးအေးကြူလေး ကတော့ ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင်က လာပိတ်ခိုင်းတာပါ၊ မာန်ထက်ချီ ထုတ်လုပ်ရေး ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းကို (သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံရဲ့ အဖေ) က ကြည်ဖြူသျှင်ရဲ့ ကားထက် စောပြီး ထွက်ချင်တယ်လို့ တင်ပြလာတယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ရဲ့ ကားကို စောထွက်လို့မရအောင် ဒါရိုက်တာကို အနုပညာ လုပ်ကိုင်ခွင့် သုံးလ ပိတ်လိုက်ရတာတဲ့ဗျာ။ ကျနော့် အဖြစ်ကတော့ ပဲလှော်ကြား ဆားညပ်တာပေ့ါဗျာ” လို့ ဇာဂနာက မစပ်စုကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကြက်ဥကျွေး၊ နွားနို့တိုက်နေသောအဖွဲ့ အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာသို့ (ကုလားမလိုတော့သည့် မြို့စစ်တွေ)
9:11:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ယနေ့အထိစစ်တွေမြို့ပေါ်ထဲတွင်ကုလားမရှိသည့် ရက်ကိုရေတွက်ကြည့်ပါကတစ်နှစ်၊ နှစ်လနှင့် တစ် ဆယ့်တစ်ရက်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ စစ်တွေမြို့၌ကုလားနှင့် ပဋိပက္ခစဖြစ်သည့်နေ့သည်၉၊၈၊၂၀၁၂နေ့ဖြစ်ပါ သည်။ မောင်တောရှိရခိုင်များနှင့် နတလကျေးရွာများကိုကုလားများအကြမ်းဖက်ပြီးနောက်နေ့တစ် ရက်ဖြစ်သည်။
ပြဿနာဖြစ်စ၌ အစိုးရလူကြီးများက စစ်တွေမြို့မိ၊ မြို့ဖများကိုမြို့တော်ခန်းမ၌ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကြပြီး စစ်တွေမြို့၌ ကုလားမရှိက အလုပ်သမားရှားပါးသွား မည်ဖြစ်၍ ကုလားမရှိပဲ ရခိုင်များ နေနှိင်ကြပါမည် လောဟုမေးမြန်းခဲ့ဖူးသည်။ မြို့မိ/ဖများကလည်း ရပါတယ်။ ကုလားနဲ့ တွဲလို့ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေ မနေ ထိုင်လိုတော့ပါ။ သူတို့လောက်ကျွန်တော်တို့ တွေမကောက်ကျစ်၊ မရက်စက်နှိင်ပါ။ ဒီတော့ဒီလိုလူ တွေနဲ့ လုံးဝခွဲသွားတာက နောင်အနာဂါတ်အတွက် ပိုကောင်းပါမယ်။ ခုနဲနဲပါးပါး အလုပ်ပြဿနာတက် တာကအရေး မကြီးပါဟု အားတင်းကာအဖြေပေးခဲ့ ကြသည်။
၂၀၁၂ ဇွန်လတတိယပတ်မှ ပင်စ၍ စစ်တွေမြို့စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည် ပုံမှန် လည်ပတ်ရန်အတွက် ရခိုင်ကုန်သည်၊ ဆိုင်သည်များ မိမိအသိစိတ်ဖြင့်မိမိ တို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြသည်။ ဆင်းရဲသားရခိုင်လက် လုပ်လက်စား များကို ယခင်ကုလားအလုပ်သမားများ နေရာတွင်မျိုး ချစ်စိတ်အရင်းခံ၍ သွန်သင်ဆုံးမလမ်း ညွှန်ပြသရင်းအလုပ်ပေး၊အလုပ်သင်ခဲ့သည်။
အောက်ခြေလူတန်းစား ရခိုင်များကလည်းကြိုးစား သင်ကြားနာခံခဲ့ကြပါသည်။ အဆင်မပြေသူ၊ ကန့်လန့် တိုက်သူ၊ အပိုးမကျိုးသူ များစွာရှိခဲ့သော်လည်းနောင် ခြောက်လခန့်ကြာမြင့်လာသောအခါတော်တော် လေးပြောင်းလဲ အဆင်ပြေလာခဲ့ကြပါသည်။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး ပုံစံကောင်းများ လည်းရရှိပေါ် ထွက်လာခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်လာခဲ့ရပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကားစစ်တွေမြို့ရခိုင်အလုပ် သမားတို့၏ အခြေအနေမှာ များစွာအဆင်ပြေနေပါပြီ။
ယခု အောက်ခြေ လူတန်းစား ကျပန်းအလုပ်သမား တစ်ဦးသည်တစ်နေ့လျှင် ၈၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ထိဝင်ငွေ ရရှိကြပါသည်။ သို့သော်အလုပ်ကိုရှာနေသူမှပါ။ တစ်ချို့များကတော့၅၀၀၀လောက်ရရင်ကိုအလုပ် မရှာတော့ပဲ ထိုင်နေချင်ကြတာလည်းရှိပါသည်။ ပုံမှန်နေ့စားလက်သမား၊ ပန်းရံယောကျာင်္းများသည် တစ်နေ့လျှင် ၅၀၀၀ မှ ၈၀၀၀ထိရကြပါသည်။ မိန်းမတွေကတော့ ၃၀၀၀ မှ ၄၅၀၀ ထိရကြပါသည်။ သို့သော် သူတို့၏ပုံမှန်အလုပ်ချိန်မှာသက်သာပါသည်။ နံနက် ၈နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ စကားတပြောပြောလုပ်။ အိမ်ပြန် ပြီးထမင်းစား။ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၆ နာရီထိ စကား တပြောပြောနှင့်လုပ်။ တစ်နေ့ လုပ်ငန်းပြီးပါပြီ။ စကားတ ပြောပြောနဲ့ လုပ်ကြတာလို့ကျွန်တော်ဖော်ရေးထား တယ်နှော်။
ယခင်ကုလားများသာလုပ်ခဲ့သည် အလုပ်များကိုလည်း ရခိုင်တွေ ဝင်လုပ်လာကြပါပြီ။ အရေအတွက် သိပ်မများသေးသော်လည်း နောင်တော့များလာမည် သာဖြစ်၏။ ၎င်းတို့မှာ--ဝါးလုံးရှည်လည်ရောင်းခြင်း၊ ဂုံနီအိပ်ခွံရောင်းကြခြင်း၊ အသုံးဝင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ၍ (ပုလင်းခွံ၊ ပလစ်စတစ်) ရန်ကုန်သို့တင်ပို့ ကြခြင်း၊ အုန်းသီးနုများလည်း ရောင်းခြင်း၊ ဈေးခြင်း တောင်း/ငှက်ပျောခိုင်မသယ်လိုသည့်စစ်တွေမှဈေး ဝယ်ဒေါ်ကြီးများကို ကူသယ်ပေးမည့် ရခိုင်ကလေး ငယ်များဈေးတွင် ရောက်ရှိလာခြင်း၊ ရေခဲချောင်း ရောင်းကြခြင်း၊ အဝတ်လျှော်/မီးပူထိုးလုပ်လာကြ ခြင်း၊ ဟိုခြင်း၊ဒီခြင်း၊ညာခြင်း။
သို့သော်တစ်ခြားလုပ်ကွက်များလည်းရှိပါသေးသည်။ ကျန်ပါသေး၏။ ဥပမာ-ငှက်ပျောသီး လည်ရောင်းခြင်း မရှိသေးပါ။ ကွမ်းယာလောက၊ ဆန်တန်း၌ဆန်ဆိတ် ထမ်းခြင်းများကိုတော့ ရခိုင်ဆိုင်သည် /လုပ်သားများ လုံးဝအမိအရချုပ်ကိုင်ထားခဲ့ပြီ။
ဖြဲကြည့်လျှင် တော့ပြည့်စုံသည်ဟုမရှိ၊ လိုအပ်သည်များ ပေါ်လာစမြဲပင်။ ၎င်းလိုအပ်ချက်များ ကိုဆိုင်သည် နှင့်ဝန်ထမ်း။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား။ သူဌေးနှင့် ဆင်ရဲသား တို့သည် သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက်မျှတွေးကာ ရှေ့ခရီးကို မငြီးမငြူဆက်ကြရပါမည်။ ဒါမှသာကုလား ဝင်ပေါက်ပို၍ ပိတ်စေ့ထူသိပ်လာပေမည်။
၁၉၄၂ခုနှစ်ပဋိပက္ခသည် ၎င်းခတ်အခြေအနေအရ မီဒီယာကွန်ယက် မကျယ်ပြန့်သေးမှုကြောင့် သမိုင်း သာကျန်ရှိနေရုံမျှအပ တိုးတိတ်စွာပြီးဆုံးခဲ့ရသည်။
ယခု ၂၀၁၂ တွင်မူတိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေး များကြောင့် ကုလားတွေ၏ မသမာမှုများစွာကိုဖော် ထုတ်နှိင်ခဲ့ကြသည်။ဖော်ထုတ်နေဆဲလည်းဖြစ်၏။
သို့သော် ရခိုင်ပြည်တွင်းသို့ လည်းခိုးဝင်၊ ရခိုင်လူမျိုး ကိုလည်းမျိုးပြုတ်အောင်ကြံရွယ်၊ ခိုးဝင်ကြောင်း လည်းမြန်မာစာ/ စကားတစ်လုံးမှမပြော /မရေးတတ် သူများကိုမှကြက်ဥကျွေး၊ နွားနို့တိုက်နေသောအဖွဲ့ အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိနေဆဲပင်။ သူတို့ မှာ ငွေကြေးနှင့်သြဇာပြည့်စုံ လွန်းလှပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့မှာ မူစည်း လုံးမှုနှင့် အမှန်တရားပြည့်စုံပါသည်။
ငွေကြေးသြဇာပြည့်စုံသူများကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်ခိုက် နေရသည်။ သူတို့ကလည်းထင်မည်။ ဒီရခိုင်စုတ်တွေ ဘယ်လောက်တောင့်ခံနှိင်မလဲ? ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း တောင့်ခံပြရမည်။ အလုပ်လုပ်ရင်းတိုက်။ စီးပွားရေး လုပ်ရင်းတိုက်။ အိမ်တောင်ပြုရင်းတိုက်။ သားကိုရှင် ပြုရင်းတိုက်။ ကထိန်ကပ်/ အလှူလုပ်ရင်းတိုက်။ တိုက်ကြစမ်းပါ။
ခုလည်းကုလားမလိုတာတစ်နှစ်ကျော်သက်သေပြ ခဲ့ပြီ။ ယခုသက်ရှိထင်ရှား ၂၀၁၂ ကိုကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ရခိုင် လူမျိုးတွေတစ်သက်လုံး ကုလားမလိုတာပြလိုက်ကြ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မှန်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ်မောင်းနှင်နေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်း ကိုဖျက်လို့ရမှာ တစ်ခုသာရှိသည်။ သူတို့ကလွဲလျှင်
ဘယ်လူ၊ဘယ် အဖွဲ့အစည်းမှ ဖျက်လို့မရတော့ပါ။
ကေအိုင်အေ အနိုင်ကျင့်မှုများအား ဆက်တိုက်မည်ဟု ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ပြော
9:04:00 PM Myanmar News Updates No comments
တပ်နေရာဖယ်ခိုင်းရေး ပြေလည်မှုမရှိသရွေ့ကေအိုင်အေဘက်ကို ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်သွား မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသား လွှတ်တော်အမတ် ဦးစက်ခုံတိန်ယန်း က ပြောဆိုလိုက်သည်။
“သူတို့က နိုင်ငံတော်ကို အနှောင့်အယှက် ပေးတဲ့လူတွေ၊ အုပ်ချုပ်မယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်က လက်ပိုက်ကြည့်နေပေမယ့် ပြည်သူတွေကတော့ မနေနိုင်ဘူး။ မဆုတ်ရင် တုန့်ပြန်မှာပေါ့။ ထပ်ပြီး လုပ်ရမှာပဲ။ ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလည်း ပြည်သူ့အင်အားက ပိုကြီးတယ်။ မောင်းထုတ်မှာပဲ”ဟု အမျိုးသား လွှတ်တော်အမတ် ဦးစက်ခုံတိန်ယန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ပန်ဝါအခြေစိုက် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)တို့ အကြား သြဂုတ် ၁၇ ရက်နှင့် ၁၉ တို့တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့်ပတ်သက် ၍ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးစက်ခုံတိန်ယန်းအားမေးမြန်းစဉ် ယခုကဲ့သို့ဖြေကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးစက်ခုံတိန်ယန်းက မိမိဦးဆောင်သည့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က ယခုကဲ့သို့ ကေအိုင်အေဘက်ကို တပ်နေရာဖယ်ခိုင်းရေးမှာ ပြည်သူများ လုံခြုံရေး အတွက် တိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။
“နိုင်ငံတော်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်လို့ အပစ်ခတ်ရပ်တာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒေသခံတွေကို ဖမ်းတာတွေ၊ နှိပ်စက်တာတွေ လုပ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ အမြတ်ထုတ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒီတော့ပြည်သူတွေက လက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့တပ်တွေ ရုတ်ရင်တော့ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူး။ သွားမတိုက်လို့ ရှိနေတာပါ။ တိုက်ရင် စောစောစီးစီး ဘယ်နေနိုင်မလဲ။ ပြည်သူတွေမှာ အိမ်မပြန်နိုင်ဘူး။ ကျောင်းမတက်ရဘူး။ အလုပ်မလုပ်ရဘူး။ ဒါကြောင့် တိုက်ရတာပါ” ဟုလည်း ပြောသည်။
ဦးစက်ခုံတိန်ယန်းက တိုက်ပွဲစတင်မဖြစ်ပွားမှီ ၁၀ရက် အလိုခန့်က ကေအိုင်အေဘက်သို့ ပန်ဝါရှိ တပ်စခန်းများကို ဆုတ်ပေးရန် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ပို့အပြီးတွင် ယခုကဲ့သို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PCG)မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာထံမှ သိရသည်။
“စာမှာက ပန်ဝါမှာရှိတဲ့ ကေအိုင်အေတပ်တွေကို ရုတ်သိမ်းပေးပါ။ သိက္ခာကျတော့ မခံဘူး၊ မဆုတ်ပေးဘူးဆို သူတို့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရာဇသံ စာမျိုး ပေးလာခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုလုပ်ချင်လို့ စာအရင်ပို့ သွေးတိုးစမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ လုပ်တယ်လို့ သုံးသပ်ရတယ်။ ခုက နှစ်ဘက် မတော်တဆမဟုတ်ဘဲ ကေအိုင်အေစခန်းကို လာဝိုင်းပြီးမှ တိုက်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်သူ့စစ်က တပ်မတော်လက်အောက်မှာပဲ ရှိတော့ မ.ပ.ခ တိုင်းမှုးဆီ ကျနော်တို့ပြောတယ်” ဟု ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ပြောသည်။
စတင်စစ်ဖြစ်ပွားသည့် သြဂုတ် ၁၇ ရက်နေ့က နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ထပ်မံ တိုက်ပွဲများ မဖြစ်စေရန် အတွက် မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှုးက နှစ်ဖက်စလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံထားသော်လည်း သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်က ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကချင်ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
“ဦးစက်ခုံထိန်ယန်းအနေနဲ့က လွှတ်တော်အမတ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီမှာ အမျိုးသား လွှတ်တော် အမတ်အနေနဲ့ ပါတယ်။ အရင်ကလို အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်အနေနဲ့ ပြည်သူ့စစ်ကို ခုလို ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ပွဲဖန်တီး လုပ်လာတာကိုတော့ စဉ်းစားရမှာပါ။ ကျနော်တို့က သူတို့ပြောသလို နယ်မြေ ကျူးကျော်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ အရင်ထဲက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ် ထားတဲ့ နေရာတွေပါ။ ပြည်သူတွေ ကိုနှိပ်စက်တာလည်းမရှိဘူး”ဟု ကေအိုင်အေမှ စစ်ဦးစီးမှုး ဗိုလ်မှုးကြီး မရန်ဇော်တောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြည်သူ့စစ်နှင့် ကေအိုင်အေတပ်တို့သည် သြဂုတ် ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီခန့် တွင်တကြိမ်၊ အဆိုပါ ည ၁၀ နာရီတွင် တကြိမ်၊ သြဂုတ် ၁၉ မနက် ၆ နာရီခန့်တွင် တကြိမ် ပေါင်း ၃ကြိမ် ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ထိတွေ့မှု အရ ကချင်တပ်တွင် ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဟု ဗိုလ်မှုးကြီး မရန်ဇော်တောင်က ဆိုပြီး ပြည်သူ့စစ်ဘက်မှမူ ၁ ဦးကျဆုံး ကြောင်း ပန်ဝါအခြေစိုက် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ သိရသည်။
“မ.ပ.ခ တိုင်းမှုးဆီ ကျနော်တို့ ပြောတော့ သူတို့ဘက်ကလည်း ပြည်သူ့စစ်တွေ ကို ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်တဲ့နေရာမှာ ခုလို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေဖို့ ပြောထားတယ်လို့
သိရတယ်”ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(PCG)မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ဧရာဝတီသို့ ဖြေကြားသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာမှာ ကေအိုင်အေ တပ်မတော်၏ တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၀ လက်ခွဲ တပ်စခန်းငယ် တစ်ခုရှိရာ ချီဗွေနှင့်လောက်ခေါင်ကြား မိုင်တိုင် ၆ အနီး မြောင်ဂျောင်အနီး တွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
8:53:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ အသက် ၅၅ နှစ်အောက် ကော်ဖီ သောက်သုံးမှု လွန်ကျူးသူများတွင် သေဆုံးမှု နှစ်ဆ ပိုများကြောင်း ယခုလေ့လာထားချက် မှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အတွင်း လေ့လာထားချက်များ ဖြစ်ကြောင်း အသက် ၂၈ နှစ်မှ ၈၇ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီး ၄၃၇၂၇ ဦးကို လေ့လာရာမှ ရလဒ်ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယင်းစာစောင်က ဆိုသည်။
မိတ္ထီလာတွင် ကင်တားနားကို ဆန္ဒပြမှု ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ သဘောထားလုံးဝ မပါဟု သတင်းရရှိ
8:14:00 PM Myanmar News Updates No comments
မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားအား ဒေသခံများနှင့် အတူ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော မိတ္ထီလာမြို့ခံ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား အဖွဲ့ဝင်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်ပြီး ထိုဆန္ဒပြမှုတွင် ရန်ကုန်ရှိ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့၏ သဘောထား လုံးဝ မပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
“ရန်ကုန်က ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့၊ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ သဘောထားအရ ဒီ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား အဖွဲ့ရဲ့ နာမည်ကိုသုံးပြီး လုပ်ဆောင်ခွင့် မပြုပါဘူး။ ရန်ကုန် ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘောထားမပါဘဲ လုပ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို လှမ်းပြောပြီး သတိပေးပြီးသား ဖြစ်တယ်။ နောက်နောင်တွေ ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကြိုတင်အကြောင်းကြား အသိမပေးရင် ကျနော်တို့နဲ့ ဖြေရှင်းမှုတွေ လုပ်ရမယ်” ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ကိုဇော်မင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သို့ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းတခုခုမှ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီး မစ္စတာ ကင်တာနာကို ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များ၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရဟန်းများ၊ ဒေသခံ လူထုဖြင့် စုပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ပူးပေါင်းရပ်တည်ခဲ့ခြင်းမှာလည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြုမဟုတ်ဘဲ မြို့ခံတဦးအနေဖြင့်သာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိတ္ထီလာ မြို့ခံ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ကိုသီဟက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မစ္စတာ ကင်တားနားကို ဆန္ဒပြရန် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းထဲက မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်တွင် စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီး ညနေ ၇ နာရီ ၀န်းကျင်တွင် လူ ၁ ထောင်ကျော်မျှ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မစ္စတာ ကင်တားနား မိတ္ထီလာမြို့သို့ ရောက်လာချိန် ည ၁၀ နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန့်တွင် လူ ၃၀၀ ၀န်းကျင်အထိ မစ္စတာ ကင်တားနား လိုက်ပါလာမည့် ကားတန်းကို ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ကာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
“မြို့သူမြို့သားတွေ အကုန်လုံး စုပေါင်းပြီး လုပ်တာ။ ကျနော်တို့ တဖွဲ့တစည်းတည်း အနေနဲ့ ဦးဆောင်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တောင်းဆိုထားတာက သူလာရင် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးဖို့ပဲ တောင်းဆိုထားတာ။ ခွင့်ပြုချက် တောင်းထားတာ။ ကျန်တာ ဘာမှမပါဘူး။ ကျနော်လည်း မြို့ခံတဦးအနေနဲ့ပဲ ၀င်ရပ်တည်တာပါ” ဟု ကိုသီဟက ဆိုသည်။
အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို မိတ္ထီလာမြို့ခံ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့က မိတ္ထီလာခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူမှတဆင့် မစ္စတာ ကင်တားနားထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း မိတ္ထီလာခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်စိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုသည် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့တွင် လက်ရှိ ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော ည ၁၀ နာရီနောက်ပိုင်း ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ကျော်လွန်ပြီး မစ္စတာ ကင်တားနား လာရောက်သည့် အချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြ သူများကိုလည်း အရေးယူရန် အစီစဉ်မရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကင်တားနားကျတော့ ၁၀ နာရီ နောက်ပိုင်းမှလာတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေကို သွားခွင့်ပေးတယ်၊ သူ့ကျတော့ခွင့် ပေးပြီး ဒေသခံတွေကြတော့ ခွင့်မပေးဘူးလား၊ ဘာလားနဲ့ပေါ့။ ညမထွက်ရ အမိန့်ကြောင့်လည်း အရေးယူဖို့ မရှိပါဘူး။ ကင်တားနားပြန်တော့ လူစုခွဲကြပြီး ပြန်ကြတာပဲ။ သူဖာသာသူ လမ်းဘေးကနေ ရပ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်တာပဲဆိုတော့။ ကားတန်းလည်း မပိတ်ပါဘူး။ အဓိကက မစ္စတာ ကင်တားနားကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးချင်တာ” ဟု ဦးတင်မောင်စိုးက ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် လူအုပ်က အော်ဟစ်ခြင်း၊ မောင်းနှင်လာသော ကားတိုင်းနားသို့ တိုးကပ်ကာ မစ္စတာ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များ၊ တီရှပ်အင်္ကျီများကို ပြခြင်းကြောင့် မစ္စတာ ကင်တားနား အနေဖြင့် အနည်းငယ် ကြောက်လန့်မှု ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လုံခြုံရေးရဲ များဖြင့် စောင့်ကြပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ ကင်တားနားသည် မိတ္ထီလာမြို့တွင် နေပြည်တော်မှ လာကြိုသော ကားများနှင့် လဲလှယ်ပြောင်းစီးချိန် ၁၀ မိနစ် ဝန်းကျင်သာ ရှိခဲ့ပြီး မိမိနှင့်လည်း ကောင်းစွာ စကားပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဦးတင်မောင်စိုးက ပြောသည်။
မစ္စတာ ကင်တားနားထံသို့ ပေးအပ်လိုက်သော အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် မိတ္ထီလာမြို့ခံ ပြည်သူများအနေဖြင့် ဘင်္ဂါလီများအား အားပေးအားမြှောက် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု ပြုနေသော မစ္စတာ ကင်တားနား အား မြန်မာနိုင်ငံမှ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာသွားရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်နောင် လာရောက်ခြင်း မပြုရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကင်တားနား အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တာဝန်မှ အမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးရန်၊ အထူး ဆောင်ရွက်ရမည့် ရာထူးနှင့် တာဝန်အား အလွဲသုံးစားပြု၍ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းအား သိက္ခာမဲ့စေသော ကင်တားနား အား ပြတ်သွားစွာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချလိုက်ကြောင်း စသည့် အချက်များ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် မြို့ခံလူထု အနေဖြင့် မစ္စတာ ကင်တားနား တင်သွင်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအား လုံးဝ လက်မခံကြောင်း၊ ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီများကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ပေးသင့်သည်ဆိုသော တိုက်တွန်းချက်ကို လုံးဝကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေကို ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံကြောင်း၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုးထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသော လူမျိုးစု လုံးဝမရှိဟု လက်ခံထားကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားသော်လည်း အမျိုးသားအခွင့်အရေးကို ဦးစားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းကို မူအားဖြင့် လက်ခံသော်လည်း တဖက်သတ် ထိပါးစော်ကားသည့် မည်သည့် ကိစ္စရပ်မျိုးကိုမဆို လုံးဝ လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်းတို့လည်း ပါရှိသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား၏ ၁၁ ရက်အကြာ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အပါအဝင် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ သွေးထွက်သံယိုမှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဒေသများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယနေ့ညနေတွင် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်သည်။
8:14:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အကောင့် လော့ကျတဲ့အခါ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ ကာယကံရှင် လူတိုင်းကြုံတွေ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ရမှ အကောင့်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ ပြောထားပြီး နီးစပ်ခင်မင်ရာ သူငယ်ချင်း ဖုန်းနံပါတ် ငှားလိုက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ အသိတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုပြီး အကောင့် ပြန်ရတာမျိုးအနည်းငယ်ရှိပေမယ့် ဒါက ရေရှည်မကောင်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆို Facebook ဟာ ယင်းဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်သားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ယခုလို Lock ကျတာမျိုးတို့ H*** ခံရတာမျိုးနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ယင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အမြဲပတ်သက်နေရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အမြဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အကောင့်လော့ကျတဲ့အခါ အကောင့်ကို ဘာမှ မသုံးပဲ ၄၈ နာရီ (၂ ရက်တိတိ) ဒီတိုင်းထားပါ။ ၁ရက်ခွဲလည်း ရပေမယ့် Facebook က ၂ ရက်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ Step အတိုင်းသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ ထိုင်ကလိနေရင်တော့ သတ်မှတ်ရက်ထက် ပိုကြာသွားနိုင်ပါတယ်။
8:07:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အဆင့်၁။General keyboard shortcuts
အဆင့်၂။Keyboard shortcuts for GNOME desktop
Alt + F9 = minimizes the current window.
Alt + F10 = maximizes the current window.
Alt + Space = opens the window menu.
Ctrl + Alt + + = Switch to next X resolution
Ctrl + Alt + - = Switch to previous X resolution
Ctrl + Alt + Left/Right = move to the next/previous workspace
အဆင့်၃။Keyboard shortcuts for Terminal
Ctrl + A = Move cursor to beginning of line
Ctrl + E = Move cursor to end of line
Ctrl + C = kills the current process.
Ctrl + Z = sends the current process to the background.
Ctrl + D = logs you out.
Ctrl + R = finds the last command matching the entered letters. Enteraletter, followed by Tab + Tab = lists the available commands beginning with those letters.
Ctrl + U = deletes the current line.
Ctrl + K = deletes the command from the cursor right.
Ctrl + W = deletes the word before the cursor.
Ctrl + L = clears the terminal output
Shift + Ctrl + C = copy the highlighted command to the clipboard.
Shift + Ctrl + V (or Shift + Insert) = pastes the contents of the clipboard.
Alt + F = moves forward one word.
Alt + B = moves backward one word.
Arrow Up/Down = browse command history
Shift + PageUp / PageDown = Scroll terminal output
အဆင့်၎။Keyboard shortcuts for Compiz
Alt + Tab = switch between open windows
Win + Tab = switch between open windows with Shift Switcher or Ring Switcher effect
Win + E = Expo, show all workspace
Ctrl + Alt + Down = Film Effect
Ctrl + Alt + Left mouse button = Rotate Desktop Cube
Alt + Shift + Up = Scale Windows.
Win + Left mouse button = take screenshot on selected area
Win + Mousewheel = Zoom In/Out
Alt + Mousewheel = Transparent Window
Win + P = Add Helper
F9 = show widget layer
Shift + F9 = show water effects
Win + Shift + Left mouse button = Fire Effects
Win + Shift + C = Clear Fire Effects
Win + Left mouse button = Annotate: Draw
Win + 1 = Start annotation
Win +3= End annotation
Win + S = selects windows for grouping
Win + T = Group Windows together
Win + U = Ungroup Windows
Win + Left/Right = Flip Windows
အဆင့်၅။Keyboard shortcut for Nautilus
Shift + Ctrl + N = Create New Folder
Ctrl + T = Delete selected file(s) to trash
Alt + ENTER = Show File/Folder Properties
Ctrl + 1 = Toggle View As Icons
Ctrl +2= Toggle View As List
Shift + Right = Open Directory (Only in List View)
Shift + Left = Close Directory (Only in List View)
Ctrl + S = Select Pattern F2 = Rename File
Ctrl + A = Select all files and folders
Ctrl + Shift + W = Close All Nautilus Windows
Ctrl + R = Reload Nautilus Window
Alt + Up = Open parent directory
Alt + Left = Back
Alt + Right = Forward.
Alt + Home = go to Home folder
Ctrl + L = go to location bar
Ctrl + H = Show Hidden Files
Ctrl + + = Zoo
m In Ctrl + - = Zoom Out
Ctrl +0= Normal Size
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ ၀ယ်ယူရေး ကန်ထရိုက် ပေးမည့် စာရင်းမှ EADS ကုမ္ပဏီကို ပယ်ဖျက် ခဲ့ခြင်း
8:04:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် စစ်လက်နက် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် EADS ကုမ္ပဏီ ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ ဂျက်တိုက် လေယာဉ်များ ၀ယ်ယူရေး ကန်ထရိုက် ပေးမည့် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ခဲ့ကြောင်း ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း ၀ယ်ယူရေး စီမံကိန်း ဌာန ( DAPA ) ရှိ အမည် မဖော်လိုသူ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် ကို ကိုးကား၍ Yonhap သတင်း အေဂျင်စီက သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု ဆင်ဟွာ သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ် အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ကန်ထရိုက် စာချုပ်အတွက် EADS နှင့် Boeing ကုမ္ပဏီတို့ နောက်ဆုံး အဆင့် ကျန်ရှိခဲ့ကြောင်း ၊ တောင်ကိုရီးယား အနေဖြင့် တစ်ယောက်မောင်း တိုက်လေယာဉ် ၄၅ စင်းနှင့် ၂ယောက်မောင်း တိုက်လေယာဉ် ၁၅ စင်း ၀ယ်ယူ ထုတ်လုပ်ရေး လိုလားလျက် ရှိသော်လည်း EADS ကုမ္ပဏီက အသုံးစရိတ် ပြဿနာကြောင့် တန်ဖိုး ကြီးမြင့်သည့် ၂ ယောက်မောင်း တိုက်လေယာဉ် ၆ စင်းသာ ထုတ်လုပ် ပေးမည်ဟု အဆိုပြု ခဲ့သည့်အပြင် ခန့်မှန်း အသုံးစရိတ် တွက်ချက် ဖော်ပြ ရာတွင်လည်း တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့်သာ ဖော်ပြ ပေးစေလို သော်လည်း EADS ကုမ္ပဏီက ဗြိတိန်ငွေကြေး ပေါင် ဖြင့် ထွက်ချက် ဖော်ပြ ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ကန်ထရိုက် ပေးမည့် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Yohap သတင်း အေဂျင်စီက ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် လက်ရှိ အချိန်တွင် F 15 Silent Eagle တိုက်လေယာဉ် များ ထုတ်လုပ် ပေးမည့် Boeing ကုမ္ပဏီ တစ်ခုတည်းသာ နောက်ဆုံး တင်ဒါ ပေးမည့် ကုမ္ပဏီ အဖြစ် ကျန်ရှိတော့ ကြောင်း ၊ DAPA သည် တောင်ကိုရီးယား စစ်ဘက် အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိ သူများက နောက်ဆုံး လေ့လာ သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ရေး အတွက် Boeing ကုမ္ပဏီ က အဆိုပြု ထားသည့် အချက်အလက် များကို တင်သွင်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် သက်တမ်းရင့် F4နှင့် F5ဂျက်တိုက်လေယာဉ် များနေရာတွင် ခေတ်မီ တိုက်လေယာဉ်များ ကို အစားထိုး အသုံးပြုရေး အတွက် အဆိုပါ ကန်ထရိုက် ကို ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အမီ နိုင်ငံပိုင် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း စက်ရုံ များ တည်ဆောက်သွားမည်
8:00:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရန်ကုန် ၊ ၂၀-၈-၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံပိုင် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း စက်ရုံ ၁၀ ရုံခန့်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်အမီ တည်ဆောက် သွားနိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး နှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောပြချက် အရ သိရသည်။
မြန်မာလူမျိုး များတွင် နို့ဆီ ၊ နို့စိမ်း ဈေးကွက်မှာ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်စွာ တည်ရှိ နေခြင်းကြောင့် အဆိုပါ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများကို တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျန်းမာရေး ကို အထောက်အကူ ပြုသည့် နို့သောက်သုံးသည့် အလေ့အထ တိုးမြှင့် လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် နို့နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်း များကို ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်စေရန် ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ် လိုသည့် အတွက် ကြောင့်လည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နို့စားနွား အကောင်ရေ ၅ သိန်းဝန်းကျင် ခန့်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် စုစုပေါင်း နို့ထွက် ပမာဏမှာ မက်ထရစ် တန်ချိန် သန်းပေါင်း ၉၈၀ နီးပါး ရှိသဖြင့် ကုန်ကြမ်း လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဆိုပါ နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း စက်ရုံများကို နေပြည်တော် အပါအ၀င် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မည့် တိုင်းဒေသကြီး များတွင် ဆောက်လုပ် သွားရန် ရည်ရွယ် ထားကြောင်း ၊ လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း များကို ဂျာမနီ နှင့် သြစတြေိးလျ နိုင်ငံတို့မှ ၀ယ်ယူ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဥရောပ နိုင်ငံများတွင် လူတစ်ဦး၏ နို့သောက်သုံးသော ပမာဏမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၂၀၀ ကီလိုဂရမ် နီးပါး ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင်မူ ၂၆ ကီလိုဂရမ် မျှသာ ရှိသည်ဟု စစ်တမ်း များအရ သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့ရှိ လူစီးရထားတွဲ ပေါ်တွင် အမေရိကန် အမျိုးသမီးတစ်ဦး တိုက်ခိုက်ခံရ
8:00:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့ တွင် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင် က ဒေသတွင်း ပြေးဆွဲ ခုတ်မောင်းလျက် ရှိသော ရထား တစ်စင်းပေါ်တွင် လိုက်ပါ လာသော အမေရိကန် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို အမျိုးသား တစ်ဦးက ဓားဖြင့် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ဖော် ပြောကြားချက် များအရ သိရသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် Michelle Mark အမည်ရှိ အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် မွမ်ဘိုင်းမြိုကတွင် လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်မှစ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင် ခဲ့ပြီး မကြာခဏ ရထားဖြင့် သွားလာလေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုနေ့တွင် အဆိုပါ အမျိုးသမီး သည် Churchgate ဘူတာရုံမှ ထွက်ခွာလာသော လူစီးရထားတွဲ အလွတ်တစ်ခု ပေါ်တွင် လိုက်ပါ လာခဲ့ကြောင်း ၊ Marine Lines ဘူတာရုံ အရောက်တွင် အမျိုးသား တစ်ဦးသည် ၄င်း ရထားတွဲပေါ် တက်လာခဲ့ကြောင်း ၊ Charni Road ဘူတာရုံ မရောက်မီ အမျိုးသမီး ၏ ပိုက်ဆံအိတ် ကို လုယူရန် ကြိုးပမ်းစဉ် အမျိုးသမီးက ပြန်လည် ခုခံသောကြောင့် ယင်း အမျိုးသားက ဓားဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြား ခဲ့သည်။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး၏ မျက်နှာ ၊ လည်ပင်း နှင့် လက်မောင်း တို့တွင် ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရရှိခဲ့ပြီး သူမအား မွမ်ဘိုင်းမြို့ တောင်ပိုင်းရှိ နီအာဆေးရုံ သို့ ပို့ဆောင် ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သူမအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အမျိုးသားမှာ အသက် ၂၀ ကျော် အရွယ်ရှိပြီး ၄င်းအား ယခုတိုင် ဖမ်းဆီး နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကာတာကို ဆိုင်းငံ့ဖို့တောင်းဆို
7:56:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
From : .. rfa
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် စည်းရိုးကာရံနေတဲ့ကိစ္စမှာ မဏိပူရ်ပြည်နယ်ရဲ့ မြေပိုင်နက်တချို့ ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်လို့ ဆိုင်းငံ့ထားသင့်ကြောင်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။
မဏိပူရ်ပြည်နယ် အင်ဖားမြို့မှာ UNM-M ခေါ် ညီညွှတ်သော မဏိပူရ် အင်ဂျီအိုမစ်ရှင်အဖွဲ့ကကြီးမှူးပြီး မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် စည်းရိုးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ မဏိပူရ်တက္ကသိုလ် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒါနာဘီယာက လက်ရှိ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် စည်းရိုးစီမံချက်မှာ မဏိပူရ်ပြည်နယ်ရဲ့မြေပိုင်နက် (၆) မိုင်ကျော်လောက် မြန်မာဘက်ကိုပါသွားဖို့များကြောင်း၊ အဲဒါကြောင့် ဒီစီမံချက်ကို ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် မဏိပူပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ကြားဝင်ဟန့်တားသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ညီညွှတ်သော မဏိပူရ်အင်ဂျီအိုမစ်ရှင် အဖွဲ့အတွင်းရေးးမှူးကလည်း နယ်စပ်စည်းရိုး စီမံချက်ရပ်ဆိုင်းရေး အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ အိန္ဒိယအစိုးရတွေဆီ တင်ပြမှာဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂကို တင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့ပြင် မြန်မာ မဏိပူရ် နယ်စပ်မျဉ်းကို ကုလသမဂ္ဂကကြီးမှူးပြီး ပြန်လည်တိုင်းတာပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို မဏိပူရ် ပြည်န်ာအစိုးရ အာဏာပိုင်တွေ၊ ကျေးရွာလူကြီးတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Gmail Password ပျောက်ဆုံးသွားပါက ပြန်ရယူနည်းလေးပါ....(မသိသေးသောသူများအတွက်)
7:52:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကျွန်တော် Gmail password ပျောက်သွားပါကပြန်ယူနည်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
ယခု password ပြောင်းပြီးပြန်ဖွင့်မရသော ပြသနာအားဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
အရင်ဆုံး Gtalk လေးကိုခေါ်လိုက်ပါ။
username နဲ့ password ဖြည့်တဲ့အကွက်အောက်က Forgot your password ? ကို clickလိုက်ပါ။
ထို့နောက် Email ထည့်ခိုင်းပါမည်။ မိမ်ိပျောက်သွားသော mail ကိုထည့်ပါ။
Type the characters in the box ဆိုပြီး အောက်ကစာလုံးများကိုရိုက်ခိုင်းပါမည်။ ထည့်လိုက်ပါ။
ထိုအခါ 1. Email to …….@gmail.com
2. Answer your security question
3. I no longer have access to these ဆိုပြီး ၃ခုထဲမှ ရွေးခိုင်းပါမည်။
နံပါတ် ၁ - မိမိ recovery လုပ်ထားသောမေးလ်ထဲကို reset link ပို့ပေးခြင်းပါ။
နံပါတ် ၂ - မိမိအကောင့်လုပ်စဉ်ကဖြည့်ခဲ့သော security answer ကိုဖြေခြင်းပါ။
အထက်ပါ၂နည်းလုံးတွင် အခက်အခဲရှိသူများအတွက် နံပါတ် ၃နည်းကို တင်ပြပေးပါမည်။
I no longer have access to these ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ထိုအခါ page ၁ခုကိုရောက်သွားပါမည်။
-An email address we can use to contact you ဆိုတဲ့အကွက်တွင် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသော
အကောင့် ၁ခုခု ကိုထည့်လိုက်ပါ။
(ထိုမေးလ်ထဲသို့ reset password link ပို့ပေးပါမည်။ မိမိပျောက်ဆုံးသွားသော မေလ်း မ ထည့် ရ ပါ။)
-Reenter email address ဆိုသောနေရာတွင်အပေါ်က ဖြည့်ထားသော မေးလ်ကိုပြန်ထည့်ပါ။
- ထို့နောက် I believe someone has taken overy my account ကိုရွေးပါ။
-Do you use gmail with this acc ဆိုသောနေရာတွင် YES ကိုရွေးပါ။
ထိုအခါ gmail username ကိုဖြည့်ခိုင်းပါမည်။ မိမိပျောက်ဆုံးသွားသော Emailကို ထည့်လိုက်ပါ။
-Email address of up to five frequently emailed contacts ဆိုသော
အကွက် ၅ကွက်တွင် မိမိပျောက်ဆုံးသွားသော အကောင့်ထဲမှာရှိသော gmail အကောင့် ၄ခုထည့်ပါ။
-ထို့နောက်အောက်တွင်ရှိသော မေးခွန်းများကိုကျော်ပြီး အောက်ဆုံးရှိ Account creation dateကိုသွားပါ။
Month, Year ဆိုပြီးရွေးခိုင်းပါမည်။
မိမိအကောင့်စလုပ်ခဲ့သည့် နှစ် နှင့် လ ကို ဖြည့်ရပါမည်။
အကယ်လို့ “လ” ကိုမမှတ်မိပါက ခန့်မှန်းပြီးထည့်လိုက်ပါ။
-Last successful login date ကတော့ သိပ်အရေးမကြီးပါ။
နောက်ဆုံးအကောင့်သုံးခဲ့သည့် ရက်ဆွဲကို ခန့်မှန်းပြီးဖြည့်လိုက်ပါ။
-ကဲ .... နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုေ၇ာက်ပါပြီ။
Last password you remember ကတော့ မိမိနောက်ဆုံးသုံးခဲ့သည့် password ကိုထဲ့လိုက်ပါ။
-ပြီးနောက် submit ကိုနှိပ်ိလိုက်ပါ။
ထိုအခါ gmail svr ကိုပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၂၄နာရီအတွင်း စာပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါမည်။
-ပြီးနောက် An email address we can use to contact ဆိုသောနေရာတွင် ဖြည့်ခဲ့သည့်mail ကိုဖွင့် ၍
စောင့်နေလိုက်ပါ။ မိနစ်အနယ်ငယ်အတွင်း gmail မှ သင့်ထံ I can’t access my accဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်နှင့် စာ
Good news -- you’re just steps away from regaining access to your account! To
begin the password reset process for your Google Account, click the link below:
ဆိုသော စာမျိုးရောက်လာပါက အိုကေသွားပါပြီ။
မိမိအကောင့်ကို reset pwd ချခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Good news အောက်တွင်ပါသောလင့်လေးကို ကလစ်ပြီး new pwd and confirm pwdကိုဖြည့်ပြီး
reset your password and sign in, follow these steps:
Step 1: Runavirus scan on all computers you use (you should do this on
a regular basis). Do this before changing your password to make sure your
computer doesn’t have any malicious programs trying to steal your password.
To viewalist of available anti-virus software, visit
2. Enter your Gmail username into the 'Email address' field.
4. Select 'Email to ****@***.com', then click 'Continue'.
Step 3: Once you’ve changed your password, make sure your password
recovery options are up-to-date by visiting
Step 4: Secure your Google Account against unauthorized access by
following our step-by-step instructions at
In particular, check your Gmail settings (filters, forwarding, POP/IMAP) to
make sure your mail isn’t being forwarded to an account you don’t recognize.
ထိုကဲ့သို့ စာမျိုးရောက်လာပါက မိမိဖြည့်ထားသည်မှာ မမှန်ကန်ပါ။
မိမိဖြည့်ခဲ့သော Account creation date သည်မှာနိုင်ခြေရှိသည်။
‘လ’ ကိုသေချာပြန်စစ်ပါ။ မသေချာပါကနောက်တစ်လပြောင်းပြီးထပ်စမ်းပါ။
Good news ဆိုသည့်စာ မရောက်မချင်းပို့ပါ။
ပို့ပါက svr က mail အများကြီးပို့ ၍လက်မခံကြောင်း စာရောက်လာပါမည်။
ထို့ကြောင့်မိမိမေလ်းထဲသို့ I can’t access my acc ဆိုသောစာ ရောက်လာမှသာ
Credit By နည်းပညာမြို့တော်
ငါးသလောက်ကို အကြေးထိုးပြီး ရေစင်ကြယ်အောင်ဆေး၍ ကြိုက်နှစ်သက်သလို အနေတော်အရွယ် အတုံးလေးတွေ တုံးပါ။ ဆား၊သကြား၊ငံပြာရည်၊နနွင်းမှုန့်၊ရှာလကာရည် တို့ဖြင့် ဆုပ်ပြီးနယ်ပေးပါ။ညက်အောင်ထောင်းထားသောငရုတ်၊ကြက်သွန်နီနှင့် ပါးပါးလှီးထားသော ခရမ်းချဉ်သီးများကို အစေ့များထုတ်၍ ငါးများနှင့်ရောနယ်ကာ နာရီဝက်ခန့်နှပ်ထားပါ။
ငါးသလောက်ပေါင်းမည့် ပေါင်းအိုးထဲသို့ အိုးမတူးမကပ်အောင် စပါးလင် အောက်တွင်ခင်းပေးပြီး အပေါ်မှ နှပ်ထားသော ငါးသလောက်များကို ဆီအသင့်အတင့်နှင့် ငါးကို ရေမြုတ်အောင်ထည့်ကာ အိုးအဖုံး လုံအောင်ပိတ်၍ နာရီဝက်ခန့် တည်ထားပါ။ ငါးသလောက်အရိုးများနူးလျှင် အပေါ့အငံမြည်းကာ အရသာ ကောင်းမွန်သော ငါးသလောက်ပေါင်းလေး သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီရှင်။
5:10:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
“ မှားသီးဇွန်” လို့သာ နာမည်ပေးလိုက်ချင်တော့တယ်။ ကိုးမိုးသီးဇွန်ရယ်။ ရှစ်လေးလုံးပွဲတွေတက်ဖို့ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြန်လာတာတွေ့ရတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်ပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေလည်း ၀မ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။
၀မ်းသာတာကတော့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပွဲကြီးမှာ တစ်ချိန်က တက်တက်ကြွကြွ ရှေ့တန်းကနေ အနစ်နာခံပြီး ဒီမိုကရေစီအေ၇းကို လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်ကို ကျန်းကျန်းမာမာပြန်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာတာပါ။
၀မ်းနည်းတာကတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်တစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ခံစားရလို့ ၀မ်းနည်းတာပါ။
တစ်နေ့က Messenger ဂျာနယ်မှာ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ဖတ်လိုက်မိလို့ပါ။ အမေရိကန်မြေပေါ်မှာ အမေရိကန်အစားအစာတွေ စားလာခဲ့လို့များလား စကားသံတွေက အမေရိကန်သံဝဲနေပါတယ်။
သုံးခွန်းပြောရင်လည်း တစ်ခွန်းက အမေရိကန်ဆိုတဲ့ စကားလည်းပါနေပါတယ်။ ဒါလည်း ပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး။
ဒီငွေရတုပြီးမှသာ Reconcilatilon Argenta လုပ်သင့်တယ်။ အခုလုပ်တာ နည်းနည်းရောထွေးနေတယ်လို့မြင်တယ်။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် ခံစားချက်တွေ ထုတ်ပေးရမယ့်ပွဲပေါ့။ 0utlet တွေ ထွက်အောင် လုပ်ပေးရမှာ။ ၂၅နှစ်တာ ကာလမှာ ခံစားခဲ့ရတာတွေကို ဖြေသိမ့်ပေးရမှာ။ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပေးရမယ့်ပွဲကြီးပေါ့။ အဲဒီအစား နိုင်ငံရေး အာဂျင်တာတွေနဲ့ သွားရောထွေးလိုက်တဲ့အခါ အရမ်းနားလည်မှုတွေလွဲတာ တွေ့ရတယ် “လို့ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြောသွားတာကိုတော့ သဘောတူတယ်။
အမေရိကန် ပတ်စပို့ပြလိုက်တာနဲ့ အရာခပ်သိမ်း တံခါးကပွင့်သွားတယ်။ သော့ကြီး ကမ္ဘာ့ရွှေသော့ကြီး ကျွန်တော့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ မြောက်တောက်တောက် စကားလည်း လက်ခံပါသေးတယ်။ ( ဒါပေမယ့် အဲဒီရွှေသော့ကြီးနဲ့ အယ်လ်ကိုင်ဒါတို့၊ တာလီဘန်တို့ရဲ့ တံခါးတွေတော့ သွားမဖွင့်မိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ )
ကိုဋ္ဌေးကြွယ်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့လို ကိုမိုးသီးဇွန်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်တယ်၊ ပါတီထောင်ချင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ဟာ ရင့်ကျက်ဖို့လိုပါတယ်။ အနေအထိုင် အပြောအဆိုတွေ အမှားအယွင်းနည်းဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာနည်းဖို့လိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ခရေစေ့တွင်းကျ နားမလည်ဘဲ စကားမကျွံမိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ရှေးက မြန်မာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်က မန္တလေးရဲ့ ဒီနားမှာပဲ ယိုးဒယားတန်းတွေရှိတယ်။ ဟိုဘက်မှာ ပေါ်တူဂီတွေရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကို ခွင့်ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ မွတ်စလင်တွေကိုလည်း ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဗုဒ္ဒဘာသာက အခြေခံအခိုင်အမာကြီး ရှိနေတယ်လေ လို့ပြောလိုက်တော့ . . .
ခုချိန်မှာကော ဒီလိုတခြားဘာသာတွေကို ခွင့်မပေးတာ တွေ့လို့လားမေးချင်တယ်။ “ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ အင်မတန်မှ ထုနဲ့ထည်နဲ့ဆိုတော့ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ လို့ ကိုမိုးသီးဇွန်က ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုမှ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ကိုမိုးသီးဇွန်ထင်ထားတာထက် အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြောသလို ယုံကြည်မှုရှိရင် ပြီးစတမ်းဆိုရင် တိုင်းပြည်တွေမှာတောင် စစ်တပ်တွေ ထားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အမေရိကန်အစိုးရက ကြည်း၊ရေ၊လေတပ်တွေ အကြီးအကျယ်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပြီး ကမ္ဘာ့စူပါ ပါဝါဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေတာတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိလို့လား ဒါမှမဟုတ် ကြောက်စရာရှိနေလို့ တွေးစရာပါ။
“ ကာကွယ်ရေး”ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ကို ကိုမိုးသီးဇွန် သဘောမပေါက်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်တယ်၊ ဘယ်သူ့မှ မကြောက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ထားရမယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ မျိုးစောင့်ဥပဒေအပေါ်မှာ ပေးတဲ့မှတ်ချက်ပါပဲ။ ကိုမိုးသီးဇွန်က ဒါကတော့ ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။ ဒီကိစ္စက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒက အဓိကကျတယ်။ . . . ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့မြင်တယ်”ဆိုတာပါပဲ။
မေးခွန်းမေးသူက လစ်ဘရယ်လိုက်ဇေးရှင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စောစောကလို လူအများစုက မငြင်းဆန်ဝံ့တဲ့ ၊ မငြင်းဆန်ရဲတဲ့၊အခြေအနေလိုမျိုး ဥပဒေလိုမျိုးကို (မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ စာရေးသူ) ကိုမိုးသီးဇွန်က ကန့်ကွက်လိုက်တာက နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ ထောက်ခံမဲကျသွားနိုင်တယ်လို့ မယူဆဘူးလား လို့မေးပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန်က မယူဆဘူး စိန်တောင်ခေါ်လိုက်ဦးမယ် လို့ဆိုပါတယ်။ အကြံပေးရရင်တော့ ကိုမိုးသီးဇွန် စိန်ခေါ်ဖို့လည်း စိတ်မကူးနဲ့၊ ပါတီထောင်ဖို့လည်း မစဉ်းစားနဲ့တော့ ဒီလောက်နဲပပဲ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အမြော်အမြင်ကို သဘောပေါက်သွားကြပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်နဲ့အခု မတူတော့ဘူး။ ဟိုတုန်းက record ရဲ့ အစွန်းထွက်တောင် ထောက်ခံမှုမရနိုင်ဘူး။ ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်ဘာလဲ၊ ကျန်တဲ့လူတွေဘာလဲ သိကြပြီလေ။ ဒါကြောင့် တစ်ချိန်က ရွှေထီးဆောင်းတာကို မပြောတော့နဲ့၊ အဲဒီရွှေထီးက ဆွေးမြေ့နေလောက်ပါပြီ။ ကိုမိုးသီးဇွန်က ကြွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Messenger ကမေးခွန်းမေးသူကလည်း ကွတ်တိမေးလိုက်ပါတယ်။ ”” ကိုမိုးသီးဇွန်လို့ဆိုလိုက်ရင် အရင်က နိုင်ငံရေးဦးဆောင်သူတစ်ယောက် ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်သတင်းတွေက အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ သတင်းတွေများတယ်။ နောက်ကျောင်းသားတွေ အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပါ ပါနေတယ်။ အဲဒီပေါ်မှာရော?
မေးခွန်းက ချက်ကောင်းထိသွားတော့ အဖြေက မသဲမကွဲ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာ ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးအမေရိကန်အစိုးရကို အကြောင်းကြားပြီး သူ့ကို အမေရိကန်မှာ တရားစွဲလိုက်ပါလို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုနိုင်အောင်နဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့အဖြစ်က ဦးနေ၀င်းတို့အဖွဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကို ဗုံးခွဲတုန်းကလို လက်သည်ပေါ်ဖို့ ခက်သားလား။
စကားက ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ တိမ်ကြားရောက်သွားပုံက ကျွန်တော်က အမေရိကန်သွားတယ် (သွားပါ သွားပါ) Europe သွားမယ်။ (သွားပါ သွားပါ) သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ကို Gentleman တစ်ယောက်လို ယုံကြည်တယ်။ လက်ခံတယ်။ (လူကဲခက် အတော်ညံ့ကြတယ်) ၉၆၉ ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ပြောပြမယ်။ (ခုနကလို ၉၆၉ကို လုံးဝလက်မခံတဲ့အကြောင်းများလား)။
. . . ဒီမိုကရေစီ ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အစွမ်းအစကို သိလို့လည်းပါမှာပေါ့လေတဲ့။ အဲဒီလို ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်လိုက်တော့မှ ပြောပြမှပဲ သိရတယ်ဗျာ)
Messenger မေးသူက စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့။ တစ်ချိန်က ကိုမိုးသီးဇွန်က အဖမ်းခံရမှာ စိုးရိမ်လို့ ပြည်ပကို ထွကခွာသွားတာလို့ကြားတယ်။ အခုချိန်မှာ တကယ်လို့ Return ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲ လို့မေးပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန်က အဖမ်းခံရတာကို ထိုင်စောင့်နေတာလောက် ညံ့တာဘာရှိမလည်း။ ကိုယ်ကိုဖမ်းမယ်မှန်းသိရင် နိုင်ငံရေးသမားက တစ်ခုခုပြန်လုပ်ရမှာပေါ့ လို့ဖြေပါတယ်။ ထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက် သံမဏိစိတ်ဓာတ်နဲ့ အဖမ်းအဆီးမကြောက်၊ ထောင်မကြောက်ဘဲ သတ္တိ၊ဇွဲနဘဲနဲ့ တော်လှန်ခဲ့သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို စော်ကားတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရ ကိုမိုးသီးဇွန်ရယ်၊ ကျားအနားမှာတင် ကျားနဲ့ယှဉ်ရဲသူနဲ့ ကျားကို အဝေတစ်နေရာကနေ ခဲနဲ့လှမ်းပစ်သူ ဘယ်သူသတ္တိရှိပါသလဲ။ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ အမြင်ကို ကျွန်တော်လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။
နောက်ထပ်သဘောမတူတဲ့အချက်ကတော့ ကိုမိုးသီးဇွန် အသေအချာ မလေ့လာဘဲ မှန်းသမ်းရမ်းတုပ်သွားတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမြင်ပါပဲ။
မျိုးစောင့်ဥပဒေမှာ “ မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များက တောင်းဆိုလာကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ရေရှည်အတွက်ပါပဲ။ တခြားဘာသာတွေက သူတို့မိန်းကလေးတွေကို ထိမ်းမြားချင်ရင် သူတို့ဘာသာထုံးတမ်းကို အရင်ခံယူပြီးမှ လက်ထပ်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲသွားဖို့တာက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာ မျှတတဲ့ အပေးအယူ နားလည်မှုတွေရှိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေခဲ့ရင် လူ့အဖွဲအစည်းတွေကြားမှာ အစိုင်အခဲတွေရှိလာပြီး ကြာလာရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ မီးပွားတစ်စကျတာနဲ့ ထတောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာ မိန်းခလေးကို တခြားဘာသာဝင်နဲ့ လုံးဝထိမ်းမြားခွင့် ပိတ်ပင်တာမှမဟုတ်ဘဲ။ ပေးစားမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကူးပြောင်းပြီးမှ ပေးစားမယ်။ ဒီသဘောပါ။ ခင်များတို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမီးတွေ၊ တူမလေးတွေကို ဘာသာခြားနဲ့ ပေးစားရတော့မယ်ဆိုပါတော့ ဒီဥပဒေရှိထားဖို့ မကောင်းဘူးလား။ ဒီဥပဒေမရှိရင် ကျွန်တော်တုိ့၊ ခင်များတို့ သမီးလေးတွေဟာ သူတစ်ပါးကျွန်ပြုသမျှနုရတော့မှာပါ။ ပထမတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ မလိမ့်တပတ်ပြောပြီး ယူမှာပါ။ အပျိုရည်လည်း ပျက်ပြီးရော ဆင်းတုတော် မထားရဘူး ဘုရားမသွားရ သံဃာရှိမခိုးရတော့မှာ။ ပြီးရင် သူတို့ဘာသာထဲကို ချောချည်တစ်ခါ ခြောက်ခါတစ်လှည့် သွင်းတော့မှာ မွေးလာတဲ့ သားသမီးလည်း ထိုနည်းအတူပါပဲ။
နောက်ပြီး ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ မိန်းခလေးတော်တော်များများဟာ ယောကျာင်္းသေရင် ဖြစ်ဖြစ် တခြားအကြောင်းကြောင်းဖြစ်ဖြစ် အိမ်ပေါ်က ပြန်ဆင်းလာရင် လက်ချည်းပဲ ပြန်လာကြရတာ များပါတယ် ဒီဥပဒေထုတ်ပီးရင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုး မရှိတော့ဘူး။
ဗုဒ္ဒဘာသာ မိန်းကလေးကို ယူပြီး သူတို့ဘာသာထဲ သွင်းနိုင်ရင် ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်မွေးရင် ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့တယ် ဆိုတာတွေလည်း ဒီဘက်က သံဃာတွေမှာ အထောက်အထားတွေနှင့် ရှိထားတော့ သူတို့ဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား မငြင်းရဲတာလည်း ဆိုးပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက် ခြံစည်းရိုး မကာမိခဲ့တော့ အခုမှာ ကာဖို့လုပ်တာကို အထူးအဆန်း ဖြစ်နေကြတာပါ။
မြို့တစ်မြို့မှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို ဘာသာခြားက ဆဲဆိုတယ် ဘုန်းကြီးက ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ရုံးမှာပဲ တရားစွဲတယ် ဆဲတဲ့သူ ထောင်ကျတယ်။ ဒီတော့ ထောင်ကျသူရဲ့ မိသားစုကို ဘာသာခြားတွေ သိန်း(၁၀၀)ကျော် ၀ိုင်းထောက်ပံ့တာ ဘယ်လိုသဘော ဖြစ်သွားနိုင်လဲ၊ ဘုန်းကြီးကို ဆဲရင် သိန်း(၁၀၀)ကျော် ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်မသွားဘူးလား ဒါတွေက အခုမှ ထဖြစ်တဲ့ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဘူး နှစ်ပေါင်းမျာစွာ ရှိလာခဲ့တဲ့ အစိုင်အခဲတွေ ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေပေါ်ထွန်းလာရင် နှစ်ဖက်ညီမျှသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းလာမှာပဲ အမေရိကန်ကလာတဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန် အများကြီးလေ့လာဖို့ လိုပါသေးတယ်ဗျာ။
Credit : Express Times
Express Times / Page No. 27
1:35:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
12:13:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတာကတော့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကား ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က ကားဒီဇိုင်နာ Jay Ohrberg မှ ဖန်တီးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှည်ပေ ၁၀၀ ရှိပြီး ၂၆ဘီး ပါရှိတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ Ford Motor ကုမ္မဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ Limousine ကားကိုမှာ သူ့စိတ်ကြိုက် ပြန်ရှည် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Limousine က Stretch လုပ်ထားတဲ့ ကားတောင် သူ့ကားလောက် မရှည်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး Limousine ကားလို့လည်း စံချိန်တင် ရပါတယ်။ ဂင်းနစ် မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာလည်း ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ကား အဖြစ် စံချိန်တင် ထားပါတယ်။
ဒီတော့ ကား ဒရိုင်ဘာခန်းက မီးရထားတွေလိုပဲ အရှေ့ မှာ တစ်ခန်း၊ အနောက်မှာ တစ်ခန်း ပါရှိပါတယ်။ အကွေ့တွေမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် အလယ်မှာ ခါးချိုးနိုင်ပါတယ်။ ပေ ၁၀၀ ရှည်တဲ့ကားကို ခါးမချိုး ပဲ မြို့ ထဲလမ်းတွေမှာ မောင်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပေ ၅၀ အဆင်ပြေ ဖို့တောင် သတိထား မောင်းနှင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွင်းမှာ ရေကူးကန်၊ ဧည့်ခန်း၊ တီဗီကြည့်ရှုခန်း၊ အပန်းဖြေနားနေခန်း၊ အမိုးဖွင့် အပေါ်ကြည့် ခန်း၊ အိပ်ခန်း အစရှိသဖြင့် ပေ ၁၀၀ထဲမှာ သူ့စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကား ဖြစ်လာဖို့ ကုမ္မဏီ အမျိုးမျိုးက ကြိုးစားပေမယ့် ယခု သူ့ကား အရှည်ကို လိုက်မမှီသေး ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ငှားစားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါတီပွဲ၊ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေအတွက် ငှားရမ်းသူများလည်း ရှိတဲ့အတွက် Jay ရဲ့  ပေ ၁၀၀ ကား က ကမ္ဘာတစ်လွှား လူသိများ ကားတစ်စီး ဖြစ်လာပါတယ်။
12:01:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
တခါတုန်းက နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်တပါး နန်းတက်ခဲ့တယ်…… ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့ အနီးအနားမှာ အလွန်းအင်အားကြီးပြီး စစ်လိုလားတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်….. ထိုဘုရင်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်ငယ်လေး ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ပေမဲ့ ဘုရင်ငယ်လေးရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အတွေးအ ခေါ်တွေကို သဘောကျလို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်…..
အဲ့ဒီအခွင့် အရေးကတော့ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ….ဘုရင်ငယ်လေးအတွက် အချိန်တစ်နှစ်ပေးထားပြီး မဖြေနိုင်ပါက အသတ်ခံရမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်….
“လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ “ အဲဒီမေးခွန်းကတော့ ဘုရင်းလေးနဲ့ ပညာရှိအမတ်တွေကို ခက်ခဲရှုတ်ထွေးစေ တော့တာပါဘဲ…..တချိုက မဖြစ်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းလို့ထင်ကြတယ်……
ဒါပေမယ့် အချိန်းတစ်နှစ်ရဖို့အတွက် အဖြေရှာဖို့ လက်ခံလိုက်ရတာပေါ့….. ဒါနဲ့ သူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ မင်းညီမင်းသားတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ ပညာရှိတွေ၊ တရားသူကြီးတွေ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ ပြည့်တန်ဆာအမျိုးသမီးတွေပါမကျန် ဆင့်ခေါ်ပြီး အဖြေရဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်….
ဒါပေမဲ့ ပြည့်စုံ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ အဖြေတော့ မရခဲ့ပါဘူး…. နောက်ဆုံးမှာတော့ လူအများစုက တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ စုန်းမအိုကြီး တစ်ယောက် သာလျှင် ဒီအဖြေကို ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ လျှေက်တင်ကြတယ်…..စုန်းမကြီးဟာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အဖိုးအခကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်… အဖြေပေးရမဲ့ နောက်ဆုံးရက်ဟာ တဖြေးဖြေးနီးလာပါပြီ….စုန်းမကြီးဟာလဲ သူ့တောင်းဆိုချက်ကို အရင်လိုက်လျှောမှ အဖြေပေးနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်… တောင်းဆိုချက်ကတော့ ဘုရင်လေးရဲ့ ယုံကြည် အားအကိုရဆုံးသူငယ်ချင်း လဲဖြစ်၊ နိုင်ငံရဲ့ သူရဲကောင်းစစ်ဦးစီးလဲဖြစ်တဲ့ အမတ်ကြီးကို လက်ထပ်ပေး ဖို့ပါဘဲ….
ဘုရင်လေးလဲ အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေတာပေါ့…..စုန်းမကြီးပုံစံက ခါးကုန်ကုန်၊ ကျောကုန်းဘုနှင့် အမြင်ဆိုရွားလှတယ်….သွားကလဲ ရှေသွား တစ်ချောင်ထဲရှိတယ်…အနံ့အသက်ကလဲ ဆိုရွားလှတယ်…စကားအပြောအဆို ကလဲ ကြမ်းတမ်း ညစ်ညမ်းလှတယ်….ထိုဆိုရွားလှတဲ့ စုန်းမကြီးနဲ့ နုညံ့သိမ်မွေ့ စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ယူဖို့တိုက်တွန်းဖို့ရာမှာ သူ့အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေတာပေါ့… ဒါပေမယ့် အမတ်ကြီးကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအရေးနဲ့ ယှဉ်ရင်ဒီကိစ္စဟာ သူ့အတွက် အရေးမကြီးကြောင်း ပြောဆိုပြီး အဆိုကို လက်ခံပါ့မယ်လို့ ဘုရင် လေးကို လျှေက်တင်လိုက်ပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်ကို ကြေငြာလိုက်ပြီး ဘုရင်လေးအတွက်အဖြေကို စုန်းမကြီးကပေးလိုက်ပါတော့တယ်..
သူတို့ရဲ့ ဘဝကိုသူတို့ စိတ်တိုင်းကျ စီမံခန့်ခွဲချင်တာပါဘဲ“ ထိုအခါမှ ပြည်သူတွေလဲ အဖြေကိုသိပြီး ဘုရင်ကြီးကလည်းစစ်မပြုတော့ဘဲ ဘုရင်လေးတို့တိုင်းပြည်နဲ့ မဟာမိတ်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်…အမတ်ကြီးနဲ့ စုန်းမကြီးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ????
ဘုရင်လေးလဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းနဲခြင်းတွေကို တပြိုင်နက်ခံစားနေရပြီပေါ့…. သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ အလွန်မသတီစရာစုန်းမတို့ရဲ့ လက်တွဲရမယ့် ဘဝအရေးကို စဉ်းစားမိလို့ပေါ့….အမတ်ကြီးလဲ ဆိုးရွားလှတဲ့ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့ မင်္ဂလာအိပ်ခန်းတွင်းကို ဝင်သွားရပြီ…
ဒါပေမယ့် အိပ်ခန်းတွင်းမှာတော့ အလွန်လှပတဲ့ အမျိုးအမီးလေးတစ်ယောက် ထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ အရမ်းအံ့သြသွားတာပေါ့…“ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ လဲ မိန်းကလေးရေ“ လို့ လှမ်းမေးလိုက်တယ်…. “သင်ဟာကျွန်မနဲ့ ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာ အလွန်မသတီစရာကောင်းတဲ့ ရုပ်နဲ့တွေ့ပေမဲ့ ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံခဲ့တယ်…ဒီအတွက်ကြောင့် စိတ်ထားကောင်း တဲ့သင့်ကို အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်….
ဒါကတော့ နေ့ဘက် ဒါမှမဟုတ် ညဘက် ရှင်ကြိုက်တဲ့ အချိန်ပိုင်းမှာ အခုလိုလှပမွေးပျံ့တဲ့ပုံစံနဲ့ တွေ့မြင်နိုင် အောင် ဖန်ဆင်းထားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်…“လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ဘယ်လောက်များ ရက်စက် နာကျင်စေတဲ့ မေးခွန်းပါလိမ့်…အမတ်ကြီးလဲသေ ချာစဉ်းစားပြီး အဖြေပေးရတော့မယ်….နေ့ပိုင်းမှာ ချောမောလှပတဲ့ မိန်းကလေး ကို မိတ်ဆွေတွေအလည်မှာ ပြသပြီး ညအချိန်မှာ စုန်းမကြီးနဲ့အတူတူအိပ်မလား. ဒါမှမဟုတ် နေ့ပိုင်းမှာ စုန်းမကြီးကိုပြသပြီး ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဖြစ်တဲ့ညအချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်မှာလား..??? အမတ်ကြီးဘာရွေးလိုက်တယ်ဆိုတာကို ဆက်မဖတ်သေးဘဲ သင်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ကော ဘာကိုရွေးချယ်မှာလဲ………?????
အမတ်ကြီးရွေးချယ်လိုက်တာကတော့ “ မင်းသဘောအတိုင်းပါဘဲကွာ “အဲဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါ အမျိုးသမီးလေးက အောက်ပါအတိုင်းကြေငြာ လိုက်ပါတော့တယ်….. “အချိန်တိုင်း လှပတဲ့ပုံစံနဲ့ ရှင့်ကိုမြင်တွေ့စေချင်ပါတယ် “ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဘဝကို သူမစိတ်ကြိုက်စီမံခွင့်ရရှိခဲ့လို့ပါ… ပုံပြင်လေးရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင်းက ဘာလဲ….????
ဥပေါင်း ၈၇ လုံးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသည့် စပါးအုံးမြွေကြီးတွေ့ရှိ
11:50:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော် ရီဒါ ပြည်နယ်တွင် ၁၇ ပေ အရှည်ရှိ စပါးအုံးမြွေ တစ်ကောင် တွေ့ရှိခဲ့ သည်။ အဆိုပါမြွေသည် ဥပေါင်း ၈၇ လုံးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အရ သိရသည်။
၎င်း စပါးအုံးမြွေကြီး သည် ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်တွင် တွေ့ရှိရ သော မြွေများအနက် အကြီး ဆုံးမြွေကြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အလေးချိန်မှာ ၁၆၄ ဒသမ ၅ ပေါင်ရှိသည်။
အဆိုပါ စပါးအုံးမြွေ ကြီးအား ယခုနှစ် မတ်လအတွင်းက Everglades အမျိုးသား ဥယျာဉ်တွင် ဖမ်းမိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လေ့လာကျက်စားပုံကို လေ့လာရန် ၎င်း မြေကြီး၏ နောက်သို့ သုတေသီများ က ခြေရာခံ လိုက်ကာ မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
၎င်း စပါးအုံးမြွေ သည် အရှေ့တောင်အာရှ မျိုးရင်းဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်သုံးစုကျော်က အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း မြွေမျိုးစိတ် သည် အဆိပ် မရှိသော်လည်း လူသားတို့ကို ရစ်ပတ် ဝါးမျိုကာ အသက် အန္တရာယ် ပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ၎င်း မြွေကြီးအား အမျိုးသား သမိုင်းပြတိုက်သို့ ပြန်လည်ယူ ဆောင်လာခဲ့ပြီး ရင်ခွဲစစ်ဆေး ကြည့်ရာ မျိုးဥ ၈၇ လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့ရ ကြောင်း သိရ သည်။
စပါးအုံးမြွေ များသည် ငှက်များ၊ ယုန်များ၊ မြေခွေးများနှင့် တိရစ္ဆာန်ငယ် များကို စားသောက်သည့် အသား စား သတ္တဝါ ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့သော စပါးအုံးမြွေ များသည် ၁၆ ဒသမ ၈ ပေအရှည် ရှိပြီး မျိုးဥ ၈၅ လုံးသာရှိကြောင်း၊ ယခု မြွေကြီးသည် ၁၇ ပေရှိပြီး မျိုးဥ ၈၇ လုံး ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည့် အတွက် ယခင် စံချိန်ကို ချိုးနိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
11:45:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
တစ်စုံတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် သင့်
အိမ်မက်တွေ သင် ပိုင်ဆိုင်နေပီဆိုရင်………
အဲ့ဒီ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အတွက်
နယ်ခြားစောင့်တပ်အား လောခေါင်တွင် KIO မှ တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲ
10:33:00 AM Myanmar News Updates No comments
သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံတပ်ရင်း အခြေစိုက်ရာ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒေသ လောခေါင်ကျေးရွာအနီး နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် တိုက်ပွဲ ပြန် လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု KIA စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကူညီရေး ကော်မတီတာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆားကပြောသည်။ KIA တပ်ရင်း ၁၀ ထိန်းချုပ် ရာဒေသရှိ ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုတွင် အစိုးရတပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့် ပူးပေါင်း တပ်အင်အား ၂၀၀ ခန့်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဟု ဦးဒွဲပီဆားက ဆိုသည်။
“လောခေါင်အထက်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကေအိုင်အေ ရှေ့တန်းစခန်း အစိုးရရဲ့ BGF အဖွဲ့က လာပစ်တယ်။ သူတို့ နှစ်ကြိမ် လာတိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်တိုက်တော့ သူတို့ ဆုတ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပစ်လိုက်တော့ သူတို့ဆုတ်သွားပြီး M -၂၃ စက်နှစ်လက်၊ လက်နက် ကျည်ဆံတွေ၊ ကျောပိုးအိတ်၊ အစားအစာတွေ၊ မေဂျာ တပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတွေ သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်”ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
KIO က ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက လောခေါင်အထက်တွင် KIA က နေရာယူလိုက်ရာ ထိုနေရာကို အစိုးရ လက်အောက်ခံ BGF တပ်များက ပြန်လည်ရယူလိုသဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးဒွဲပီဆားကပြောသည်။ အလားတူလောခေါင်မြို့နယ် အတွင်း အစိုးရ၏ တပ်မ ၈၈ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့ BGF တပ်ရင်း ၁၀၀၁ တပ်ဖွဲ့တို့၏ ပူးပေါင်း တပ်များနှင့် KIA တပ်များ တိုက်ခိုက်လာသဖြင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားသည်ဟု သတင်းရသော်လည်း အသေးစိတ်ကို မသိရဟု တရုတ် နယ်စပ် ကန်ပိုင်တီတွင် အခြေစိုက်သည့် BGF 1003 တပ်ခွဲမှူး ဆော်ဘွမ်က မဇိ်္ဈမကို ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကြားတာက တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာက အစိုးရတပ်တွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့တပ် ၁၀၀၁ နယ်မြေမှာဖြစ်တာ။ အခုတလော အဲဒီဘက် သတင်းထွက်ပေါ်နေတာကြာပြီ။ အဲဒီနေရာက အရင် NDAK (ဦးဇခုံတိန့်ယိန်းတပ်) နေရာတွေ ဟုတ်တယ်။ အဲဒီနေရာ ဖယ်ပေးဖုိ့ ပြောတာကို မဖယ်ပေးလို့ ဖြစ်သွား တယ်ထင်တယ်”ဟု ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၃၀ ရက်က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် KIO ကိုယ်စားလှယ်များ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်များ တွင် အစိုးရနှင့် KIA တပ်များအကြား မကြာခဏ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း မရှိတော့ဘဲ နှစ်ဖက်စောင့်ကြည့်မှုများ ရှိနေကြသည်ဟုလည်း KIA လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက မဇိ်္ဈမကို ပြောသည်။ “ခုရက်ပိုင်းတော့ တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာတွေ့ ရင် တွေ့တာနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာဘဲ။ အစိုးရ ဘက်ကတော့ အင်အားတော့ တိုးလိုက်၊ ပြန်သွားလိုက်၊ လှုပ်ရှားနေကြ တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။ လတ်တလော တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ တိုးမြင့်လာခြင်း မရှိသော်လည်း ဒုက္ခသည်များ ကိုယ့်နေရပ်သို့ ပြန်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးသဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်း ထားရှိရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၅တန်းမှ ၁၀ တန်းရှိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ ၁၈၀၀ ကျော်အား ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်ပေးရန် လိုအပ်နေသည်ဟု ဦးဒွဲပီဆားကပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၀ ကျော်မှ ၆ တန်း မှ ၈ တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်သော်လည်း စာရေးစားပွဲ မလုံလောက်သဖြင့် မိုးကာခင်းပြီး စာသင်ကြားနေကြရသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ တစ်ဦး၏အမြင်
10:07:00 AM Myanmar News Updates No comments
သြဂုတ် ၂၀ ရက် ၂၀၁၃
၂၀၀၈ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သည်လူတစ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းထား သော ဥပဒေ ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့ပြင်ဆင်မှာလဲဆိုတာကိုကျမသိချင်ပါတယ် လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အမေရိကန် ကိုရောက်နေစဉ် မှာဒေါ် အတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီး ကမေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ခြားသူမေးချင်ပြောချင်တာတွေကလဲ အများကြီး မေးပါတယ်၊ပြောပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကို ဖော်ပြချင်လို့ တခြားအကြောင်းတွေကို ဖယ်ထားလိုက် ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက တစ်ချို့ကိစ္စတွေကတစ်ဖက်အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ထဲက ကြည့်ရင်တော့ဝါးခြမ်းပဲ မြင်နေမှာပါ။ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လဲ ၀ါးခြမ်းပဲမြင်နေမှာပဲ။ နှစ်ဘက်စလုံးက လှည့်ပတ်ကြည့်မှသာ ၀ါးလုံးပါလားဆိုပြီးသိမြင်ရမှာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာလူတစ်စုအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ လူအများထောက်ခံအတည်ပြုထားတဲ့ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ် ။နောက်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတာသော့ ခတ်ထားတဲ့သံမဏိမျိုးမဟုတ်ပါဘူး လွှတ်တော်ကပြင်နိုင်တယ်၊ ပြည်သူ ကပြင်နိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိပါ တယ်…တဲ့။ ဒီဆောင်းပါးမှာဆွေးနွေးချင်တာကလဲ ဒါပါပဲ။
၂၀၀၈ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ လူတစ်စုအတွက်ရေးဆွဲ ထားခဲ့တာမဟုတ်သလို တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေချည်း ရေးဆွဲခဲ့တာမ ဟုတ်ပါဘူး။အလွှာပေါင်းစုံကတတ်သိပညာရှင်တွေ (ရုပ်ရှင်၊သဘင်၊ဂီတ၊ စာရေးဆရာများ)၊တိုင်းရင်းသားကိုယ် စားလှယ် များ၊ပါတီပေါင်းစုံကကိုယ်စားလှယ်များ၊နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်များစုပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာတစ်ခု ကိုညီညွတ်အောင်ရေးဆွဲဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြင်သာဆုံးသော ဥပမာတစ်ခုပေးရယင် မြန်မာဘောလုံးအသင်းဆိုပါတော့၊ကြည့်တဲ့သူကသာ အားမလိုအား မရဖြစ်ပြီး ဆဲဆိုနေပေမယ့် ဆဲတဲ့သူ ၀င်ကန်ခိုင်းကြည့်ပါလား။ ဟိုလိုလုပ်ပါလား၊ ဒီလိုလုပ်ပါလား၊ ငါလဲမလုပ်တတ်သူ တွေများလာရင် တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်း ပါဘူး။ ဘယ်အရာမှပြီးပြည့်စုံတာ မရှိလေတော့၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာလဲ အားနည်းချက် ဆိုတာရှိမှာပါ။ အားနည်ချက်ကိုအားသာမှုဖြစ်အောင်ပြင် ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကောင်း မွေးမြူပြီး ပြင်ဆင်ကြရပါမယ်။ ဥပဒေတစ် ခုဖြစ်မြောက်ဖို့ ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာကို အငြင်းပွားဖွယ် ပြဿနာရပ်တွေ၊ကန့်ကွက် မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ် စားလှယ်ကြီးတွေအသိဆုံးပါ။ ဒါတွေအားလုံးကိုညီညီမျှမျှဖြစ်အောင် အများလက်ခံနိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းရေးဆွဲ အတည် ပြု ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအချက်အလက်တွေဆိုရင် ၁၉၄၇ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအခန်း (၃)မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများရဲ့အရည်အချင်းကို ဖော်ပြထားရာမှာ ပုဒ်မ(၅၉)ပုဒ်မခွဲ(စ)တွင် မိမိ ကိုယ်တိုင်သော် လည်းကောင်း၊ မိမိ၏မိဘတစ်ပါးပါးသော်လည်းကောင်းမိမိ၏ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းသော် လည်းကောင်း၊မိမိ၏တရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးဦးသော် လည်းကောင်း၊ ထိုတရားဝင်သားသမီး တစ်ဦးဦး၏ ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းသော် လည်းကောင်း နိုင် ငံခြားအစိုးရ ၏ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို ခံယူစောင့် ရှောက်ရိုသေသူ သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး ၏နိုင်ငံသားဖြစ်သူများ မဖြစ်စေရ။
ထိုသူများသည်နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတစ်ပါး၏နိုင်ငံသား သော်လည်းကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေးများနှင့် ကျေးဇူးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူများမဖြစ်စေရ…ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရဲ့ မူဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုပြင်ဆင်လိုကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်ဖို့အတွက် ပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ကလဲ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို တစိုက်မတ်မတ် တောင်း ဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်လုပ်ငန်း တာဝန်တွေကိုသည် ထက်ပိုမိုမြင့်မြင့်မားမား ထမ်းဆောင် နိုင်ဖို့အတွက် သမ္မတဖြစ်ချင်နေပါတယ်။
သည်နေရာမှာ ပြည်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုပြောရမယ် ဆိုရင်ပုဒ်မ(၅၉)ပုဒ်မခွဲ(စ) မှာဖော်ပြထားတာတွေကို မပြင်သင့်ပါဘူး။ ဒေါ်ါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်နေလို့ သမ္မတ ရာထူးမှာပေးချင်တယ် ဆိုရင်လဲ ခြွင်းချက်အနေနဲ့သာပေးသင့်ပါတယ်။အထူးကိစ္စတစ်ရပ် အနေနဲ့စဉ်းစားပေးသင့် ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာလဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိနေပါ တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကလက်ရှိကွန်ကရက်စ် ပါတီဥက္ကဌ ဆိုနီယာဂန္ဒီဟာ အန္ဒိယနိုင်ငံသူ မဟုတ်ပါဘူး။ အီတလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ လူစီယာနာမြို့မှာ မွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီ သူကလေး အန်တိုနီယာ ဟာ လက်ရှိမှာ အိန္ဒိယရဲ့The most powerful woman ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၏ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ် အင်ဒီယာဂန္ဒီရဲ့ချွေးမအိန္ဒိယရဲ့ ခြောက်ယောက်မြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရာဂျစ်ဂန္ဒီရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ ရာဂျစ်ဂန္ဒီနှင့် အိမ်ထောင်ကျ ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး အရှိန် အ၀ါကြီးမားတဲ့ နေရူး-ဂန္ဒီ မိသားစုကြီးထဲသို့ ၀န်ကြီးချုပ် အင်ဒီရာရဲ့ ချွေးမအဖြစ်ရောက်လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဆင်းမှာကွန်ကရက်စ်ပါတီမှ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုနီယာဂန္ဒီကိုအိန္ဒိယ ပြည်သူအများစုက၀န်ကြီးချုပ်(သို့မဟုတ်) သမ္မတ ဖြစ်စေချင်ကြပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံမှာပြဌာန်းထားတဲ့
အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံသားဥပဒေအရ ဆိုနီယာဂန္ဒီအနေနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကို ယူ၍မရပါဘူး။ အဲဒီဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှသာ သူမအနေဖြင့် သမ္မတဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။လူကြိုက်များတဲ့ ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဥပဒေအားပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်း ဆိုခဲ့သော် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ပြင်ဆင်ဖို့ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုနီယာဂန္ဒီဟာအိန္ဒိယ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အရေးကိုကြိုတင်မျှော်တွေး၍ လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေကို လေးစားတန်ဖိုးထား၍ လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်ကျိုးထက် တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဦးစားပေးသောကြောင့်လည်းကောင်းဥပဒေ ကိုပြင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းမပြုခဲ့ဘဲ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့်သာတိုင်းပြည်အကျိုးကိုသယ်ပိုးလျက်ရှိနေသည်မှာအတုယူဖွယ်၊ လေးစားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားတစ်ခုထဲအတွက်သော်လည်း၊ မိမိခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရေး အတွက်သော် လည်း ပြင်ဆင်မည် ဆိုပါကနောင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သည့်အခါ အငြင်းပွားဖွယ် ကိစ္စများ မပေါ်ပေါက်နိုင်ဟု မည်သူမျှ အာမခံနိုင် မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ဟာ အသက်အရွယ် အရနိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သော် ၂၀၁၅ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတောင်အလွန်တစ်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေဖြင့် ပြောနေခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်တွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားကို ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းတော်စပ်ထားသူ တစ်ဦးဦးက သူလဲ သမ္မတဖြစ်ချင်ပါ တယ်။ ဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ် ဆိုလာခဲ့သော်…ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင် ပါသလား။ လက်ခံသင့်ပါ သလား။ ။
ကြက်ဥကျွေး၊ နွားနို့တိုက်နေသောအဖွဲ့ အစည်းနှင့် လူပ...
ကေအိုင်အေ အနိုင်ကျင့်မှုများအား ဆက်တိုက်မည်ဟု ပြည်သ...
မိတ္ထီလာတွင် ကင်တားနားကို ဆန္ဒပြမှု ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ ...
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၃ ဘ...
၂၀၁၅ ခုနှစ်အမီ နိုင်ငံပိုင် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့ရှိ လူစီးရထားတွဲ ပေါ်တ...
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကာတာကို ဆိုင်းငံ့ဖိ...
Gmail Password ပျောက်ဆုံးသွားပါက ပြန်ရယူနည်းလေးပါ....
ဥပေါင်း ၈၇ လုံးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသည့် စပါးအုံြးေ...
နယ်ခြားစောင့်တပ်အား လောခေါင်တွင် KIO မှ တိုက်ပွဲမျ...
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးနှင့...
မြောက်ကိုးရီးယားထောင်မှာ သတ်ဖြတ် ညှင်းပမ်းမှုတွေ နေ...
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ( Knowledges for Heal...
ဖီမှော်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အား KIA မှ လာရောက်တိုက်ခိုက်...
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများအား အမည်တပ်ကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ...
အနောက်တိုင်းသားအများအပြား ထိုင်းမှာ အိမ်မဲ့ယာမဲ့ဖြ...
ကင်တားနား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေချိန် ပုသိမ်...